Taanzaaniyaa keessatti deemsi dimookiraasii fi mirgi dhala-namaa mancaasamee jira, jedhamuun yeroo mormiin hedduun dhaga’amaa jirutti, har’a, uummatni biyyattii Prezidaant Joon Maagugulii deebisee filachuu fi dhiisuu murteessuuf jecha, bakkawwan hedduutti hiriiree sagalee isaa kennaa jira.
Prezidaant Mugufulii yeroo marsaa lammataa waggaa shaniif dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuun dorgoman kan ajjeechaa bara 2017 irratti yaalame irraa lubbuun hafan kaadhimamaa mormitootaa Tunduu Liisuu dabalatee namoota 14 jedhama.
Mootummaan Mugulufii doorsisaa fi hiraarsaan maddeen oduu walaba ukkaamsaa jira, jechuun balaaleffatu gurmuuleen mirga dhala-namaa. Kana malees interneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuu tu gabaasame.
Filannoo prezidaantummaa dhaa ala, barcumawwan paarlaamaa biyyattii 264s dorgommiin ka geggeessamu tahuun beekamee jira. Ka Chaama Chaa Mapinduuzii jedhamu paartiin prezidaantichaa eega biyyattiin bara 1961 Kolonii Briteen jalaa bilisoomtee as akkuma
Dhima Hidha Laga Abayaa Irratti Walgahiin Geggeeffamaa Jira
Hiriirii paartiin Sochii Biyyoolessa Amaraatiin Finfinnee fi Naannoo Amaaraatti yaaman yahanqate
Senetiin Amerikaa nama pirezidaanti Tiraampi mana murti walii galaatiif dhiyeeffate, Amy Barrett qoratee filate